ပုလင်းမှုတ်ဘို့ Semiautomatic ပစ္စည်းကိရိယာများ 0.1-10l
ပုလင်းစွမ်းရည် 3-6 ဂါလန်မှုတ်များအတွက်ပစ္စည်းကိရိယာ
အဝတ်လျှော်များအတွက်ပစ္စည်းကိရိယာများ, ပုလင်းဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့် capping 0.1-2l
အဝတ်လျှော်များအတွက်ပစ္စည်းကိရိယာများ, ပုလင်း 3-10 ဌဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့် capping
ပုလင်း5ဂါလံ, သန့်ရှင်းရေးဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့် capping များအတွက်ပစ္စည်းကိရိယာ
ဘဏ်များသို့ bottling များအတွက်ပစ္စည်းကိရိယာ
ပလပ်စတစ်ခွက်ထဲမှာ bottling များအတွက်ပစ္စည်းကိရိယာ
အပူ shrinkable တံဆိပ်များလျှောက်ထားမှုအတွက်အလိုအလျောက်ကိရိယာများ
အအေးကော် JND-M အတူတံဆိပ်ကပ်ခြင်းအဘို့အစက်တွေ
Self-ကော်တံဆိပ်များ၏လျှောက်လွှာ JND-630 များအတွက်ပစ္စည်းကိရိယာ
အဆိုပါ inkjet ပုံနှိပ်ခြင်းယန္တရား
တစ်ရေအအေး Supercharger နှင့်အတူ mini-အေး
ကျနော်တို့ 121th Canton တရားမျှတသောတက်ရောက်ရန်လိမ့်မယ် date: 15 ဧပြီကနေ 19 ဧပြီ 2017 ငှါ၎င်း, အကြီးစားစက် & ပစ္စည်း Booth အဘယ်သူမျှမ .: ခန်းမ 1.1 G28; နေရပ်လိပ်စာ: တရုတ်သွင်းကုန်နှင့်ပို့ကုန်တရားမျှတသော (Canton တရားမျှတသော) No.380 Yuejiang Zhong လမ်း, Hai
ကျနော်တို့ 121th Canton တရားမျှတသောတက်ရောက်ရန်လိမ့်မယ်
Shenzhen J & amp; Ltd. , ရေ Co. , သောက်ဘို့ D ကိုပစ္စည်းတရုတ်အတွက်ရေပေးဝေရေးအတှကျပစ်စညျးကိရိယာမြား၏ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပြီး, ရေပေးဝေရေးနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအတွက်ကမ္ဘာ့စျေးကွက်မှာအပေါ် 000, 70 ကျော်စတုရန်းမီတာဧရိယာပစ္စည်းကိရိယာများအပြည့်အဝအကွာအဝေးပေးထားပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ 1500 န်ထမ်းဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်ကျော် $ 80 သန်း၏ပုံသေပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ပိုပြီးထက် $ 500 သန်း၏တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်နှင့်အတူစက်ဖြည့်ဆည်း၎င်း၏အကွာအဝေး၏အရောင်းဝန်ထမ်း။
ထုတ်ကုန် ပလပ်စတစ်ဆေးထိုးတန်ဆာများအတွက်ပစ္စည်းကိရိယာ ပုလင်းများမှုတ်များအတွက်ပစ္စည်းကိရိယာ ပုလင်းစွမ်းရည် 3-6 ဂါလန်မှုတ်များအတွက်ပစ္စည်းကိရိယာ ပုလင်းမှုတ်ဘို့ Semiautomatic ပစ္စည်းကိရိယာများ 0.1-10l ပုလင်းမှုတ်များအတွက်အလိုအလျောက်ကိရိယာများ 0.1-10l ရေကုသမှုကိရိယာများ ပုလင်းသွပ်များအတွက်ပစ္စည်းကိရိယာ အဝတ်လျှော်များအတွက်ပစ္စည်းကိရိယာများ, ပုလင်းဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့် capping 0.1-2l တံဆိပ်ကပ်စက် အပူ shrinkable တံဆိပ်များလျှောက်ထားမှုအတွက်အလိုအလျောက်ကိရိယာများ marking ကိရိယာများ ထုပ်ပိုးပုလင်းနှင့်ပုလင်းများအတွက်စက်ကိရိယာများ ကျုံ့ရုပ်ရှင်ထဲတွင်ထုပ်ပိုးများအတွက်စက်ကိရိယာများ ပုံးအဘို့ပစ္စည်းကိရိယာ အပိုဆောင်းထုပ်ပိုးပစ္စည်းကိရိယာများ ရေစားပွဲတင် coolers ကြမ်းပြင်ကိုရေအေး တစ်ရေအအေး Supercharger နှင့်အတူ mini-အေး အီလက်ထရောနစ်အအေးနှင့်အတူကြမ်းပြင်ကိုရေအေး Compressor အအေးနှင့်အတူကြမ်းပြင်ကိုရေအေး အီလက်ထရောနစ်အအေးနှင့်အတူ Desktop ကိုရေ coolers Compressor အအေးနှင့်အတူစားပွဲတင်ရေအေး ဘဏ်များသို့ bottling များအတွက်ပစ္စည်းကိရိယာ အိတ်ထုပ်ပိုးများအတွက်စက်ကိရိယာများ , လက်မဆေးဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်အထူးရညျရှယျ capping များအတွက်ပစ္စည်းကိရိယာ အရန်ပစ္စည်းကိရိယာများ အရန်ပစ္စည်းကိရိယာများ
ကျနော်တို့ကိရိယာများတပ်ဆင်နှင့် configuration များအတွက်ဖောက်သည်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်ဂျင်နီယာပေးပို့နိုင်ပါတယ်, ဒါမှမဟုတ်ဖောက်သည်လေ့ကျင့်ရေးဘို့ငါတို့စက်ရုံအားမိမိနည်းပညာရှင်ပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ ရေ bottling များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ပစ္စည်းကိရိယာများကို 10 နှစျကျြောအမေရိကန်, ဗြိတိန်, အိုင်ယာလန်, ကနေဒါ, သြစတြေးလျ, မက္ကဆီကို, ရုရှား, အာဖရိက, အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့်အခြားနိုင်ငံများနှင့်တိုင်းဒေသကြီးများမှတင်ပို့နေကြသည်။
ဖိလစ်ပိုင်မှာစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးကုမ္ပဏီရှန်ကျန်း J & D ကိုသောက်ရေဖျော်ရည်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
ရှန်ကျန်း J & D ကိုဘရူနိုင်းအတွက် 2000 ခ / ဇ၏ပုလင်းရေထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်၏ရေထူထောင်လိုင်းသောက်သုံး
ကုမ္ပဏီရှန်ကျန်း J & D ကိုရေထူထောင်ပုလင်းသွပ်လိုင်းသောက်သုံးခြင်းနှင့် 120 ခ / ဇနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ပုလင်း 6000 ခ / ဇဒါဂတ်စကာမှာပုလင်း capping
ဒါဂတ်စကာ 120 ခ / ဇ၏ပုလင်းများအတွက်ကုမ္ပဏီရှန်ကျန်း J & D ကိုသောက်ရေထူထောင်ရေဖြည့်လိုင်း
အအေးကော်အတူတံဆိပ်ကပ်ခြင်းအဘို့အစက်အအေးကော် application ကိုလုပ်ငန်းစဉ်တံဆိပ်ကပ်ခြင်းအတွက်အသုံးပြုသည်။ စက်ပုလင်းအမျိုးအစားအမျိုးမျိုးများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများတံဆိပ်များလျှောက်ထားနိုင်ပါသည...
စသည်တို့ကိုပတ်ပတ်လည်ဖန်အပေါ်တံဆိပ်ကပ်ခြင်းအတွက်အသုံးပြုတံဆိပ်ကပ်အရည်ပျော်, PET ပုလင်း, သတ္တုကွန်တိန်နာများနှင့်ပတ်ပတ်လည်ကွန်တိန်နာများအတွက်စက်...
လျှောက်လွှာ JND-ကော်တံဆိပ်များများအတွက်ပစ္စည်းကိရိယာ 630 တံဆိပ်ကပ်ပတ်ပတ်လည်ပေပုလင်း, ဆေးပုလင်း, သုပ်သံဗူး, ဘီယာပုလင်းနှင့်အခြားသူများအဘို့အ Self-ကော်တံဆိပ်များများအတွက်အသုံးပြုသည်။...
ပုလင်းကွန်တိန်နာ5galllonov ၏လည်ပင်းမှအပူကျုံ့တံဆိပ်များလျှောက်ထားမှုအတွက်စက်
စံအီးနှင့်အညီဖန်ဆင်းတစ်ပုလင်းလည်ပင်းမှအပူ shrinkable တံဆိပ်များလျှောက်ထားမှုအတွက်စက်; ပုလင်းတစ်မိနစ်ကို3သို့မဟုတ်5ဂါလန်အပေါ် 100/200 အပိုငျးပိုငျး labeling ။ ရေလိုင်း bottling အတှကျအသုံးပွုပုလင်းမ...
နှစ်ခုတံဆိပ်ကပ်ခြင်းဦးခေါင်းနှင့်အတူပေပုလင်းပေါ်မှာအပူ shrinkable တံဆိပ်များလျှောက်ထားမှုအတွက်စက်
ထိုကဲ့သို့သောပတ်ပတ်လည်စတုရန်းလေးထောင့, ပြားချပ်ချပ်, ကွေး, ခွက်ကို-တူသောနှင့်အခြားသူများအဖြစ်ပုလင်းအမျိုးမျိုးနှင့်အတူအသုံးပြုရန်သင့်လျော်သောပလပ်စတစ်ပုလင်းများအတွက်တံဆိပ်ကပ်စက်။...
အလိုအလျောက် Applications ကျုံ့တံဆိပ်များ
အလိုအလျောက် Applications ထိုကဲ့သို့သောမြို့ပတ်ရထား, စတုရန်းပုလင်းများပုလင်းအဖြစ်အမျိုးမျိုးသောပုလင်းပေါ်တွင်အပူ shrinkable တံဆိပ်များလျှောက်ထားအတှကျအသုံးပွုတံဆိပ်များ, ဖလားအပြားစသည်တို့ကိုကျုံ့...
ပုလင်းထဲမှာအဖျော်ယမကာအတွက်သုံး triblocks bottling နှင့်အဝတ်လျှော် function ကိုပေါင်းစပ် 0.1-2l, ဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့် capping ။ အဆိုပါပစ္စည်းကိရိယာများဖန်နှင့်ပေပုလင်းနှင့်အတူအလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။...
ပုလင်း 3-10 လီတာဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့် capping အဝတ်လျှော်များအတွက်ပစ္စည်းကိရိယာများ, ဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့် capping, ထိုကဲ့သို့သောဓာတ်သတ္တုရေအဖြစ် Non-ကာဗွန်နိတ်အချိုရည်များထုတ်လုပ်မှုတွင်အသုံးပြုရေရေစက်နှင...
ရေကိုတိုင်ကီထဲမှာရေအဆင့်ကိုအရည် switch သည်ထက်နိမ့်သည့်အခါအနိမ့်ရေဆန့်ကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, တစ်ဦးကို5ဂါလံပုလင်းထဲသို့ရေဖြည့်များအတွက်စက်ကိရိယာများကိုအလိုအလျောက်ပိတ်ထားသည်။...
သံဗူးထဲမှာအဖျော်ယမကာ bottling များအတွက်ပစ္စည်းကိရိယာပလပ်စတစ်အိုးထဲမှာပုလင်းသွပ်စက်သည်ထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ကိုဓာတ်သတ္တုရေ, အရည်, လက်ဖက်ရည်, အဖြစ် Non-ကာဗွန်နိတ်အချိုရည်များထုတ်လုပ်မှုတွင်အသုံးပြုသည်လက်...
ပလပ်စတစ်ခွက်ကိုသို့မဟုတ်ခွက်ဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်ပိတျထားသောအဘို့ရည်ရွယ်ပလပ်စတစ်ခွက်ထဲမှာ bottling များအတွက်ပစ္စည်းကိရိယာ။ , အစာကျွေးခွက်ဖြည့်, ပိတျထားသော, ဖြတ်တောက်နှင့်ပုံနှိပ်ခြင်း, မှန်ကန်သောအဆာများန...
packages များဖြည့်ဆည်းဘို့စက်တွေ packages များသို့အရည်ထုတ်ကုန်ဖြည့်များအတွက်အသုံးပြုကြသည်ငွေစုပလပ်စတစ်ပုလင်းများအသုံးပြုခြင်းများကိုသုံးစွဲဖို့ရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ကြသည်။...
ခုနစျပါးအဆင့်ဆင့်ပါဝင်ပါသည်နှင့်ထိုကဲ့သို့သောသဲ, ဏုရေညှိ, chloro, လေးလံသောသတ္တု, အော်ဂဲနစ်ဒြပ်ပေါင်းများနှင့်ဘက်တီးရီးယားများအမှုန်အဖြစ်, ညစ်ညမ်းမှု၏ရေသန့်ရှင်းစေခွင့်ပြုထားတဲ့ခေတ်ပြိုင်အမေရိကန်ပြောင်...
သန့်ရှင်းသောသောက်သုံးရေ Ro-100A ရောင်းတော့အရောင်းစက်တွေ
အိမ်များ, စက်ရုံများ, ဘတ်စ်ကားဘူတာ, ကုန်တိုက်ကြီးတွေ, ကျောင်းများနှင့်အခြားသူများအတွက်အမျိုးမျိုးသောလူထုသောအရပ်တို့ကိုမများတွင်အသုံးပြုသောက်သုံးရေရောင်းတော့အရောင်းစက်တွေ။...
ရေကိုကုသမှုများအတွက်ပစ္စည်းကိရိယာများအဘို့အ accessory ဇီဝဏု, Desktop, စီးကူးမီတာ, စားပွဲပေါ်မှာမီးဖို, pH ကိုတိုင်းတာသောက်သုံးသောစက်, အောက်စီဂျင်မီးစက်, စတာတွေဟာသံမဏိနဲ့လုပ်ထားတဲ့ရေတိုင်ကီ, ခရမ်းလွန်ပ...
ပြည်တွင်းရေကုသမှုပစ္စည်းကိရိယာများဟာပြောင်းပြန် osmosis စနစ်နှင့်သန့်ရှင်းတဲ့သောက်သုံးရေများကိုဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေတဲ့ပိုးသတ်သည့်စနစ်တပ်ဆင်ထားသည်။ သောက်သုံးရေကုသမှုများအတွက်ပစ္စည်းများစက်ရုံများ, ကျောင်းမ...
ပင်လယ်ရေ JND-SW ၏ Desalination ကမ်းလွန်ကျွန်းများပေါ်တွင်အသုံးပြုများနှင့်လတ်ဆတ်သောရေမရှိခြင်းအရပ်၌ကမ်းရိုးတန်းမြို့ကြီးများရှိစစ်တပ်များ၏နေရာချထား။
စသည်တို့ကိုအော်ဂဲနစ်ဆား, လေးလံသောသတ္တု, အော်ဂ...
အပူရေနွေးငွေ့ကို အသုံးပြု. ရေထုတ်လုပ်မှု WFI အဘို့အပေါင်းခံရေ။ အဆင်ပြေဒီဇိုင်း, လွယ်ကူသောအလုပ်လုပ်ဖြစ်စဉ်ကိုတစ်ဦးမြင့်မားသောအပူထိရောက်မှုနိမ့်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနှင့်ရေအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုအော်တို WF...
Ultrafiltration ရေကုသမှုစက်ရုံတွင်းထွက်ရေလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန်အတွက်ကုန်ကြမ်းရေထဲကနေအမှုန်, ဖုန်မှုန့်, အော်ဂဲနစ်တ္ထုများ, မနှစ်မြို့ဖွယ်အရသာများနှင့်ဘက်တီးရီးယားဖယ်ရှားပစ်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလု...
osmosis ရေသန့်စင် JND RO1000 reverse
နေအိမ်များနှင့်စက်ရုံအလုပ်ရုံများတွင်အသုံးပြုသောရေ JND RO1000 သောက်သုံး၏ပြင်ဆင်မှုအဘို့ပစ္စည်းကိရိယာ။ ကျနော်တို့သောက်သုံးရေနှင့်သန့်သောက်ရေများအတွက်စက်တွေတော့အရောင်း၏သန့်စင်ခြင်းနှင့်ကုသမှုများအတွက်အိ...
ဥရောပအရည်အသွေးကိုစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီပေထုပ်ပိုးများအတွက်အလိုအလျောက်ကိရိယာများ (ညီညွတ်မှု၏အီးလက်မှတ်) ။ မှိုစက်များပင်အထူးလေ့ကျင့်ရေးခြင်းမရှိဘဲ, တစ်ခုတည်းအော်ပရေတာများကအလွယ်တကူနှင့်လုံခြုံစိတ်ခ...
ဥရောပအရည်အသွေးကိုစံချိန်စံညွှန်းများ (ညီညွတ်မှု၏အီးလက်မှတ်) နဲ့အညီပေထုပ်ပိုးများအတွက် semi-automatic ပစ္စည်းကိရိယာများ။ ပေကွန်တိန်နာများအတွက် semi-automatic စက်တွေကိုတောင်အထူးလေ့ကျင့်ရေးခြင်းမရှိဘဲ, တ...
ပေထုပ်ပိုးပစ္စည်းကိရိယာများပေ / PC ကိုပုလင်းစွမ်းရည် 3-6 halons များ၏ထုတ်လုပ်မှုများအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ အဆိုပါပစ္စည်းကိရိယာများတစ် microcomputer ထိန်းချုပ်မှုတပ်ဆင်ထားသည်။ အလိုအလျောက်ပုလင်းပုလ...
ထိုးနှက်တန်ဆာစက်တွေများအတွက်အရန်ပစ္စည်းကိရိယာများလေကြောင်း Compressor, လေ filter များ, အအေးခန်းနှင့်မီးဖိုများပါဝင်သည်။...
3-6 ဂါလန်ပုလင်းစွမ်းရည်မှုတ်ဘို့ JND-120 အလိုအလျောက်ကိရိယာများ
ထိန်းချုပ်မှုတစ်ခု microcomputer တပ်ဆင်ထားပေ / PC ကို 3-6 ဂါလံစွမ်းရည် JND-120 များ၏ပုလင်းမှုတ်များအတွက်ပစ္စည်းကိရိယာများ။ အလိုအလျောက်ပုလင်းအော်တိုပေပုလင်းနှင့်အတူတစ်ဦးပေါ်ကိုချိတ်ဆက်ထားရပါမည်သယ်ယူပိ...
ပုလင်း5ဂါလံ JND-90 မှုတ်ဘို့ Semiautomatic ကိရိယာများ
ကျယ်ပြန့်ပါးစပ်ကွန်တိန်နာ 25l နှင့်အတူပုလင်းသို့မဟုတ်5ဂါလံပုလင်းမှုတ်အတှကျအသုံးပွု Semiautomatic ပေပုလင်း။ ပုလင်းမှုတ်များအတွက်ပစ္စည်းကိရိယာများဟာအဓိကစက်နှင့် rotary အနီအောက်ရောင်ခြည်အပူပေးစက်တို့ပါ...
ပုလင်းများနှင့်ကွဲပြားခြားနားသော volumes ကို (300 လီတာအနည်းငယ် milliliters) နဲ့ polycarbonate ကွန်တိန်နာများထုတ်လုပ်မှုများအတွက်ရည်ရွယ်ပါသည် PC ကိုပုလင်းများအတွက်တင်ဆက်ထိုးနှက်တန်ဆာစက်။...
အတော်ကြာလီတာ 300 milliliters တစ်အသံအတိုးအကျယ်နှင့်အတူပါဆုံးတင်းကျပ်ပလပ်စတစ်ကွန်တိန်နာများထုတ်လုပ်ဘို့ရည်ရွယ်ဒါက extrusion ထိုးနှက်တန်ဆာပစ္စည်းကိရိယာများ။...
E-mail ကို: zoya@jndwater.com